Mogadishu Journal » C/risaaq Cumar “NISA waxaa loo adeegsadaa caburinta iyo cabsi gelinta siyaasiyiinta”
Kenya’s aviation authority investigates airline over accidents
Kenya seeks help to stop Al Shabaab funds
C/risaaq Cumar “NISA waxaa loo adeegsadaa caburinta iyo cabsi gelinta siyaasiyiinta”
Mjournal :-Wasiirkii hore ee Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay Hey’adda NISA oo lagu hakiyay qandaraas la sheegay inuu saxiixay sanado ka hor.
Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay inuu xilka wareejiyay bishii April ee sanadkii 2017, isagoo is weydiiyay sababta xilligan looga hadlay qandaraas uu horay u bixiyay sida uu hadalka u dhigay.
“Bishii April 4-teeda 2017 ayaa xilka wareejiyay ku dhowaad labo sano lagama hadlin, waxaa is weydiin mudan maxaa hada looga hadlayaa qandaraas la bixiyay oo la leeyahay wasiirki hore bixiyay, sababta wax kale ma ahan waxaa la rabaa in magaca laga dilo in dadka la cabsi geliyo, gaar ahaan siyaasiyiin, si aysan fikirkooda iyo dhaliilaha ay u soo jeediyaan dowladda aan loo soo jeedin, intaas waaye sababta ka dambeysa”ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq Cumar.
Waxaa uu sheegay inuu kalsooni isku qabo, isla markaana aanay jirin qandaraas lagu bixiyay sharci daro, wax walba loo maray nidaam waafaqsan sharciga sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay in Hey’adda NISA ay is bedeshay hey’ad lagu caburiyo dadka siyaasiyiinta laguna cabsi geliyo kuwa fikirkooda ka duwan yahay dowladda, isagoo xusay inuu hadda ay socoto dhaqankii Milateriga oo ah dhaqan ka soo horjeeda dimoqraadiyadda sida uu yiri.
Qoraal lagu shaaciyay barta Twitter-ka NISA ayaa lagu sheegay in la joojiyay qandaraas ku baxayay mallaayiin doollar, kaasoo uu bixiyay Wasiirkii hore Amniga, iyadoo arrintan baaritaan loo diray, loona gudbiyay Hanti dhowrka Qaranka.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa inay caburin ku heyso siyaasiyiinta ka aragti duwan, iyadoo la xusuusto weerarkii sanadkii hore lagu qaaday Guriga siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo ah Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, kaasoo si weyn u dhaliila dowladda..
Gudoomiye Yariisoow oo dadka degan xarunta Jaamacada Gaheyr ku amray in ay isaga baxaan
Haweenka maamulka Puntland oo dadaal ugu jiro sidii ay usoo dhacsan lahaayeen qoondadooda?
Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa waxaa ay Gudaha dalkaas ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsada dalkaas, xilli uu ku jiray howshiisa caadiga ah ee Shaqo. Kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Saciid Cagadhidid Xasan isaga oo ku sugnaa meel aan ka fogeen Goobtiisa Shaqada oo ku taalla tuulo 750-KM u jirta Magaalada Pretoria ee Caasimadda Koonfur Afrika. Kooxdii Burcada aheyd ee dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday,waxaana dad ku sugan Koonfur Afrika ay sheegeen in meydka muwaadinka Soomaaliyeed mudo kadib goobta laga qaaday. Dalka Koonfur Afrika ayaa sanadkan 2019 waxaa kusii kordhay dilalka loo geysanayo Soomaalida ku Ganacsata,waxaana bishan gudahaheeda dalkaasi lagu dilay saddex muwaadin oo Soomaaliyeed. by Ahmed Ali - Tue Nov 12th 18:21:55
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka qeyb galay shirka Madasha Nabadda Paris by Ahmed Ali - Tue Nov 12th 18:16:46
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyey Shir caalami ah oo ka furmay Nairobi by Ahmed Ali - Tue Nov 12th 17:58:08
Golaha Khubarada ee QM oo shaaciyay in lacag badan lagu bixiyay Doorashadii lagu doortay by Ahmed Ali - Tue Nov 12th 10:49:35
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la kulmay Madaxweynaha Faransiiska by Ahmed Ali - Tue Nov 12th 8:59:13